Zvese zvaunoda kuti uzive nezve chaiwo gasi boilers | Green Renewables
Mudzimba zhinji mabhaira anoshandiswa kudziisa mvura yekushandisa mumashawa kana mukicheni. Izvo zvakakosha kuti tizive kuti ndeapi mabhaira anonyanya kushanda kana tichida kuchengetedza pamagetsi mabhiri uye kushandisa zvakazara zviwanikwa zvatinazvo. Nhasi tiri kuzotaura nezve chaiwo gasi mabhaira.
Mune ino posvo iwe unogona kudzidza zvese zvine chekuita nerudzi urwu rweboiler. Kubva pane izvo zvavari uye nemabatiro ainoita kuti ndeapi anonyanya kushongedzwa kushandisa, uchienda kuburikidza nezvakanaka nezvakaipa zveimwe neimwe. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezvazvo?
1 Chii chinonzi gasi bhaira?
3 Mhando dzegasi chaiwo mabhaira
3.1 Mvura isina mvura isina mvura
3.2 Yakadzika NOx gasi boilers
3.3 Kugadziridza mabhaira egasi
3.4 Atmospheric gasi boilers
5 Zvakanakira magasi boilers
Chii chinonzi gasi bhaira?
Yega gasi bhaira mudziyo une mvura inodziirwa ine huni iro gasi rechisikigo.
Isu tese tinoda kuchengetedza zvakanyanya kubva muhomwe medu pazvinhu zvemumba kuti tikwanise kuishandisa parwendo, zvido kana chero chinhu chatinoda. Uye zvakare, nekushandiswa kwesimba ratiri kuisa mukati kuzvipira kune mamiriro enharaunda. Mabhaira, semimwe midziyo yemumba, akakosha zvakanyanya kuhupenyu hwedu, nekuti nawo tinodziisa mvura yatinoshandisa.
Kusarudza yakanaka modhi kana kwete zvinoenderana zvachose neruzivo rwekushandisa iyo boiler yakanakira mamiriro edu. Izvo zvakakosha kuti tizive kuti nderipi bhaira ratiri kuzosarudza zvichienderana iyo modhi, iko kugadzirisa kwainoda, kudzokororwa uye kugona. Kana tikakwanisa kusarudza inoenderana nesu, tinogona kusevha mari zhinji pakupera kwemwedzi. Uye zvakare, inofanirwa kutariswa kuti, iyo yakanyanya kushanda pamwe nehunhu hweboiler, zvishoma zvatiri kuzokuvadza nharaunda nekusvibisa kwakaburitswa.
Iwo mabhaira ane anodziya anokonzeresa kutanga kwegesi kupisa. Iyi gasi inowanzo gasi, kunyangwe paine zvekare mabhaira ane mafuta anopihwa propane kana dhiziri Kana gasi radziya, inoshandura mvura iri mukati megangi kuita chiutsi uye inobuda kuburikidza nematunhu kupisa imba yese yasara. Iyi mhute yemvura inogona kushandiswa kuyananisa iwo kuma radiator kana kunyangwe pasi pekupisa.
Propane boilers inoda imwe tangi yekuchengetera gasi, saka isu tiri kutora yakawanda nzvimbo kupfuura isu yatingade kutsaurira kune iyi mhando yemidziyo. Dhiziri dzacho dzakachipa uye dzinotibvumidzawo kubika. Uye zvakare, inoda kuburitswa kwemagasi anogadzirwa panguva yekupisa, saka ivo vanodawo kumisikidzwa kwakawanda.
Zvese izvi zvinodiwa zvinoita kuti kuisa boiler yakadaro yakawanda nguva inopedza uye pakupedzisira inodhura. Nechikonzero ichi, gasi mabhaira akachengeteka uye anonyanya kushanda. Pfungwa yegasi chaiyo yakapararira uye inoshandiswa zvakanyanya zvekuti inozivikanwa se Guta guta.
Mhando dzegasi chaiwo mabhaira
Kune mhando dzakasiyana dzemhepo gasi boilers uye, sezvakambotaurwa, isu tinofanirwa kuziva zvakanaka kuti ndeupi wavo wekusarudza kukwidziridza zviwanikwa zvedu zvakanaka, shure kwezvose, kuchengetedza mari.
Mvura isina mvura isina mvura
Aya mabhairi ane yakavharika kamuri yekupisa uye usapedze mweya kubva mukati memba. Izvi zvinovaita vakachengeteka, sezvo magasi anogadzirwa panguva yemoto haasangane nemweya watinofema.
Yakadzika NOx gasi boilers
Nitrogen oxides inosvibisa makemikari anogadzirwa panguva yekupisa neakawandisa okisijeni. Mabhaira asina chero mhando yekuburitsa mvumo ari kunyanya kusvibisa uye kushoma kushanda. Rudzi urwu rwekubhaira rine dhizaini yakafanana neiyo yapfuura asi iyo yakagadzirirwa kuburitsa shoma nitrogen oxides.
Kugadziridza mabhaira egasi
Ivo zvakare vanochengeta iyo modhi senge gasi yakasimba, asi vane mukana wekushandisa zvekare simba remvura mhute kakawanda. Ndokunge, vane dunhu iro redirects yakashandiswa mvura yemhute ku, zvakare, kubatsira kupisa iyo yasara yemvura iri mutangi. Izvi zvinoderedza mutengo wese wesimba rinoshandiswa kupisa mvura, sezvo ichitora mukana wekusara kwemhepo inopisa yemhepo inogadzirwa.
Izvo zvakare zvakachengeteka uye zvinoshanda uye isu tinogona kusevha mari yakawanda pane chaiyo gasi yekushandisa.
Atmospheric gasi boilers
Mune ino boiler modhi, kusiyana neyakange yapfuura, imba yekupisa yakavhurika uye mweya unoshandiswa kupisa mvura iri inounganidzwa kubva kunzvimbo inowanikwa bhaira. Aya mabhaira anosvibisa zvakanyanya uye haanyanyo shanda uye akachengeteka. Uye zvakare, vanochinja mamwe magasi anokuvadza kupinda mumba medu.
Kutaura nezvemitengo yakajairika kwakati omei, sezvo paine zviuru zvemamodeli erudzi rumwe nerumwe. Nekudaro, mabhaira emuchadenga (kunyangwe iwo ari iwo asingakurudzirwe) ndiwo anodhura. Mutengo waro uri kutenderera mazana matatu euros. Yakaderera mhando, yakaderera mutengo. Asi kwete izvo, isu tinofanirwa kusarudza idzi. Tichave tichisvibisa zvakawanda uye tichishandisa yakawanda gasi mukufamba kwenguva sezvo kugona kwayo kuri kushoma.
Kune rimwe divi, mabhaira asingadziviri mvura ane mutengo wakasiyana pakati pe400 ne1400 euros. Ivo vane mutengo unodhura wekutanga, asi kusanyanya kusvibisa uye kushanda zvakanyanya, mukufamba kwenguva, zvinoreva kuti kushandisa gasi kushoma uye, nekudaro, kudhura.
Zvakanakira magasi boilers
Kushandisa boiler gasi kune zvakwakanakira uye izvi zvinotevera:
Mutengo waro unowanzo kuve wakachipa (kubva ku300 euros). Inogona kuve nayo kumba.
Maitiro ayo kupisa mvura inokurumidza uye yakasununguka. Uye zvakare, sezvo iine thermostat uye pakaunda, inogona kugadzirirwa kupisa kune tembiricha yatinoda.
Ivo havawanzo kutora nzvimbo yakawanda uye vane hupenyu hwemakore mazhinji.
Iyo haidi inoda kucheneswa kana ichienzaniswa neimwe nzira yekupisa uye haina kuburitsa ruzha.
Chekupedzisira, zvakakoshawo kutumidza zvinokuvadza zverudzi urwu rweboiler. Izvo chete zvinoonekwa zvakashata ndeyekuchengetedza kwayo. Vanofanira kucheneswa kamwe chete pagore kudzivirira kuputsika uye jam uye, pamusoro pezvose, kudzivirira tsaona.
Neruzivo urwu unogona kusarudza kuti ndechipi mhando yemabhaira chakanakira iwe uye chengetedza zvakanyanya sezvinobvira pakupisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Zvese zvaunoda kuti uzive nezve chaiwo gasi boilers
Kuziva iyo Ministry yeEnharaunda uye Spatial Kuronga
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve pellet zvitofu